Iri anụ na ime dị mma, nsogbu, ụdị anaghị eri anụ. Ihe iji dochie anụ na anaghị eri anụ
Nne Ịgba afọ
Iri anụ na afọ ime bụ nri kwesịrị ekwesị maka nne n'ọdịnihu
N'ime oge gestation, nwanyị chọrọ ọtụtụ ụba nri maka mmepe nwa ebu n'afọ . Ọ dị mkpa ịzụlite nri kwesịrị ekwesị iji gboo mkpa a na-achọ maka vitamin protein na B. Ọ bụrụ na ị jụ ihe anụmanụ, nke a na-esikwu ike karị.
Ụdị anaghị eri anụ
Ndị niile na-akwado ụdị nri a na-enyeghị anụ ọ bụla, gụnyere:
Nri nke ihe ndi ozo nke sitere na anu sitere na ndu nke omenala:
Ovo-vegetarianism - ị nwere ike àkwá, mmiri ara ehi na-amachibido iwu. Nri akwukwo nri bu ihe oriri.
Lacto-vegetarianism - a na-ahapụ akwa. Nchịkọta ahụ na-ewere iji mmiri ara ehi ọhụrụ, cheese, cheese cheese, cream cream and other derivatives.
Ovo-lakto-vegetarianism - ị nwere ike iri nsen na ngwaahịa ara ehi.
Veganism bụ ịjụ ihe oriri ọ bụla sitere n'anụmanụ. Ndepụta nke bans gụnyere gelatin, glycerin na carmine.
Iri anaghị eri anụ n'ime ime dị mma na ihe ọjọọ
Ọ bụrụ na nwanyị kpebie na ọ gaghị agbanwe ụkpụrụ ya mgbe ọ dị ime, ọ ghaghị ịmụta tupu oge niile "nsogbu" metụtara ụdị nri ya. Enweghi ike imuta omumu nke anaghị eri anụ na ime ime. Ụfọdụ nnyocha na-egosi uru ọ bara dịka ihe oriri maka nne n'ọdịnihu, ndị ọzọ na-ekwu banyere nsogbu nye akụkụ na usoro nke nwa.
Uru nke anaghị eri anụ
Ndị na-esite na menu a na-eri nnukwu nri osisi, gụnyere bean na ọka. Isi uru nwanyị ime dị na-eweta anaghị eri anụ bụ vitamin E na C. Ihe oriri na-aba ọgaranya n'ihe ndị ọzọ bara uru:
"Carbohydrates" ogologo "ogologo";
na omega-3 acid;
Arụmụka ọzọ maka anụ anaghị eri anụ na ime ime - na ndị inyom na-ahapụ anụ ahụ kpamkpam, enweghi nhụjuanya , ọrịa ụtụtụ na ịkọ agbọ. Nke a bụ n'ihi enweghi ogige ọgwụ ọjọọ, ihe nchebe na ihe ndị na-eme ka mmiri ọgwụ, bụ nke a na-ejikarị emepụta n'ime beef, ọkụkọ na anụ ezi nke mmepụta mmepụta ihe.
Mmebi na anaghị eri anụ
Nri akwukwo nri enweghi otutu ihe di mkpa maka ntozu nwa. Isi ihe na-eri vegetarianism bụ protein nke sitere na anụmanụ na amino acids. Ha nwere ike dochie ya na nri nri, ma n'ihi mkpawanye nke ndị inyom dị ime na ihe ndị a ga-eri ọtụtụ ngwaahịa na-eme ka e nwee mkpịsị na eriri afọ.
Ihe odide azụ, nke ọtụtụ ndị ọkachamara na-atụle anaghị eri anụ na ime ime nkwekọ, bụ ezughị oke ma ọ bụ oke ụkọ nri:
Iri anụ na ime ime - echiche ndị dọkịta
N'ihi enweghị isi ihe àmà, ọ na-esiri ndị ọkachamara ike ikpebi ma ndị nne n'ọdịnihu kwesịrị ịjụ anụmanụ. Ụfọdụ ndị dọkịta, karịsịa ná mba ọzọ, na-akwado anụ anaghị eri anụ n'oge ime ime, na-ezo aka na nnukwu osisi nke osisi bara uru na nri dị otú a na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke vitamin. Ndị dọkịta na-ahụ maka ụlọ na-enwe obi abụọ banyere nri a, n'ụzọ ziri ezi na-ekwusi ike na enweghị ike nke ndị na-edozi na ígwè, nkwụsị cyanocobalamin kpamkpam.
Kedu ihe iji dochie anụ na nri anaghị eri anụ?
Nwa dị n'ọdịnihu dị mkpa ka ozu nne na-enweta vitamin B12 , nke na-adịghị na ihe oriri ọ bụla. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere anaghị eri anụ anaghị eri anụ ma ọ bụ ịkpa ókè na afọ ime. Nanị nhọrọ nke imeju ụkọ cyanocobalamin bụ oriri na-edozi ahụ maka ihe oriri na-edozi ahụ ma ọ bụ vitamin.
Nri n'oge omumu bu ebe bara uru nke protein bara uru na amino acids mkpa. Ngwaahịa ndị a nwere ike ịbụ ihe ọzọ:
agwa, tinyere ogwu;
kinoa (omenala pseudo-ọka);
Nri Nri Achịcha
Nne na-eme n'ọdịnihu bụ onye jụrụ ịṅụ anụ ụlọ kwesịrị iji nlezianya mara nri ya. Ndị ọkachamara na-ekweta na ihe oriri dị otú ahụ n'oge oge ime, ọ bụrụhaala na nwanyị ahụ na-eri protein - vegetarianism n'ụdị ọ bụla, ma e wezụga veganism. Na nri ga-abụrịrị ma àkwá ma ọ bụ ngwaahịa mmiri ara ehi.
Nri anụ anaghị eri anụ - Nchọta maka izu
Tupu ịmepụta ihe oriri na-edozi ahụ, ịkwesịrị ịmepụta ndepụta nri ndị dị mkpa na ogo dị elu nke protein, vitamin na amino acids. Achịcha nri ndị anaghị eri anụ kwa ụbọchị maka ndị inyom dị ime kwesịrị ịgụnye:
Mkpụrụ na mkpụrụ osisi mịrị amị (snacks, snacks);
mmiri ara ehi soy.
Achịcha nri nke ndị anaghị eri anụ maka otu izu na-ewere ihe oriri nke na-arụ ọrụ ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya na cyanocobalamin. Vitamin B12 na-anọghị na nri ndị na-ere ihe ọkụkụ, a hụghị ya n'ụsọ kalenda (ụfọdụ isi na-ekwu na ọ bụghị ihe ọzọ). Nne na-eme n'ọdịnihu ga-ewere ihe a kwa ụbọchị n'oge ime ime.
nri ụtụtụ - porridge na mmanụ linseed, toast ọka dum-ọka chiiz, tii, oroma;
nri abalị - ofe ihe oriri, salad na arugula na kọlịflawa, nri sitere na ntụ ọka dum;
nri abalị - stewed poteto na eyịm ye carrots, grated cucumbers na wheat wheat germ mmanụ.
nri ụtụtụ - millet porridge na banana, Sanwichi na hummus, tii, apụl;
nri abalị - karọt ofe na chickpeas, salad salad na olive mmanụ na ukpa, nri;
nri abalị - pilaf na mushrooms, salad salad na kukumba.
nri ụtụtụ - ọka bali porridge na ugu, tii, bun na jam;
nri ehihie - nri borscht anaghị eri anụ, salad na akwụkwọ nri na pine osisi, achịcha;
nri abalị - stewed kabeeji na carrots na mushrooms, salad akwukwo nri.
nri ụtụtụ - flakes flakes na mmanụ olive, cheese, tii tii, banana;
nri abalị - ofe na tofu, salad of sea kale na carrots, achịcha;
nri abalị - stere asparagus na zukini, salad tomato na cucumbers na chiiz.
nri ụtụtụ - osikapa mmiri ara ehi mmiri na mịrị, kuki, mmiri ara ehi soy;
nri abalị - ero ofe, agwa casserole na broccoli, achịcha;
nri abalị - poteto a na-amị mkpụrụ, salad beet with cream cream.
nri ụtụtụ - flakes nke ihe nkiri na mmanụ na-agbanye mmanụ, Sanwichi na mozzarella na tomato, tii, kiwi;
nri ehihie - borsch anaghị eri anụ na prunes, achịcha na mache, salad si avocado, kukumba na kabeeji Peking;
nri abalị - osikapa na akwụkwọ nri, toast na squash caviar.
nri ụtụtụ - curd casserole na mkpụrụ na mkpụrụ osisi mịrị amị, tii, banana;
nri abalị - ihe oriri ofe na ọka na kọlịflawa, stewed inine na mushrooms, nri;
nri abalị - ragout nke zucchini, eggplant na agwa, kabeeji salad na apụl.
Ọ ga-ekwe omume ịkụfe pịa mgbe ị dị ime?
Malignancy na ndị ime ime n'oge oge
Orgasm n'oge ime
Mbadamba ụrọ site na allergies na ime ime
Ọmụmụ oge ebughị ibu - akpata
Ureaplasma n'oge ime ime
Kedu ka tube si abịa n'oge ime?
Nkwupụta ụda olu
Dakwunye n'ime imi n'oge ime
Ọrịa obi mgbe ọ dị ime na mmalite
Ụlọ chamita nwere ike ime ime?
Mgbaàmà nke ime ọpụpụ mgbe ọ dị obere
Glycine n'oge ime
Ihe ọṅụṅụ tomato ọ bara uru?
Ụbọchị Ụmụaka Ụwa
Gịnị ka St. Spyridon nke Trimiphound nyere aka?
Enwere ndụ mgbe a nwụsịrị - nchọpụta sayensị
Shashlik na Mayonezi
Ndị Jetetị na-ekpo ọkụ n'oge oyi
Nke abụọ akara ọkụ
Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa megide ahụ ọkụ
Onye na - eme ihe ike - ndụmọdụ nke ọkà n'akparamàgwà mmadụ
Ihe ndị e mepụtara n'ime ime
Mgwakota agwa maka Pizza na-enweghị nsen
Winter akpụkpọ anụ akpụkpọ ụkwụ
Esi gbatịa jeans?
Kedu esi agbagha agụụ?
Anụ anụ ọhịa si n'aka aka nri
Nri site na otutu - nhọrọ kachasị mma
Moydodyr maka ime ụlọ ịwụ
Ụmụ nwanyị na-akwa sneakers
Kedu otu esi ahọrọ nyocha mmiri?
Naomi Campbell, Whoopi Goldberg, Kelly Osbourne na ndị ọzọ na mgbede gala amfAR